हुण्डी कारोबारमा सग्लग्न एक करोड रुपैयाँसहित ३ जना पक्राउ - BILMATEY
0 Comments हुण्डी
प्रहरीले एक करोड रुपैयाँसहित हुण्डी कारोबारमा सग्लग्न ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ। ती हुण्डी कारोबारीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टिमले काठमाडौंको ओमबहालबाट सोमबार बेलुका समातेको थियो।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरु झापाका विकास मित्तल र कमल मित्तल र पर्वतका गणेश पौडेल रहेका छन। अबैध हुण्डी कारोबार गर्नेहरुबाट प्रहरीले १ करोड रुपैयाँ बरामद गरिएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका डिआईजी सहकुल थापाले जानकारी दिएका छन। अहिले पक्राउ परेकाहरु हुण्डी कारोबारीहरुको थप अनुसन्धान भइरहेको डिआईजी थापाले बताए।
हुण्डी भनेको के हो ?
हुण्डी एक अवैध र अनौपचारिक अन्तराष्ट्रिय कारोबार वा रेमिट्यान्स हो। यो सरकारलाई थाहा नदिई गरिने पैसाको अवैध ओसार पसार हो। हुण्डीमा कारोबार गर्ने देशहरुमा सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिहरु वा एजेन्टहरु राखिन्छ र ती व्यक्तिबाट कारोबार गरिन्छ। तिनै व्यक्तिहरुले कारोबारको रकम तोकेको स्थानमा पुर्याई दिन्छन। यसरी कारोबार गर्दा सहयोग गरे बाफत सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिहरु वा एजेन्टहरुले केहि रकम कमिसनको रुपमा लिने गर्छन।
अर्थतन्त्रमा हुन्डीको प्रभाव कस्तो हुन्छ ?
हुण्डी अनौपचारिक रेमिट्यान्स भएकोले हुण्डी सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख हुदैन। यस्तो कारोबार हुँदा सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा देखिदैन र विदेशी मुद्राको अभाव सिर्जना हुन्छ। बैंकद्वारा रेमिट्यान्स पठाउँदा र पाउँदा श्रोत खुलाउनु पर्छ। तर यसको ठिक विपरित हुण्डीमा रकमको स्रोत सरकारलाई देखाउनु पर्दैन र यसरी व्यक्तिहरुले कर छल्ने गर्छन। यसरी कानुनी रुपले कर नै उठेन भने देश विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
हुन्डीबाट प्राप्त रकमको विभिन्न स्रोतहरु हुनसक्छन। हुण्डीमा धेरै जसो अपराधिक कार्यबाट प्राप्त रकमको कारोबार गरिन्छ। अबैध लागुऔषध, हतियार, सुन तस्करी, मानव बेचबिखन, आतंकवादी क्रियाकलाप लगायतका कार्यहरु हुन्डीको स्रोत रहने गर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय सुन तस्करी गर्दा लेनदेन हुन्डीमार्फत नै हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन।
हुन्डीबाट थप के कस्ता नकारात्मक परिणामहरु आउँछन ?
हुन्डीमा अपराधिक कार्यबाट प्राप्त रकमको कारोबार हुन्छ त्यसैले यसले झन समाजमा अपराधिक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। यसले गर्दा देशको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पुग्छ।
हुन्डी सरकारलाई थाहा नदिई गरिने कानुन बिपरित कार्य हो। यस अर्थमा यो आफैमा दण्डनीय छ । यसबाहेक, हुन्डीबाट गरिने कारोबार निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । हुन्डीबाट पठाएको रकम जबसम्म आफन्तको हातमा पैसा पुगेको हुदैन तबसम्म पैसा पठाउनेलाई चिन्ताले सताइरहनछ।
← नेपाल वायु सेवा निगम मा नयाँ सफ्टवेयर लागु
त्रिवि को परीक्षार्थीले आफुलाई पायकपर्ने ठाउँबाट परीक्षा दिन पाउने →
चट्याङ लागेर बागलुङमा एक युवकको मृत्यु
दिल्ली क्यापिटल्स द्वारा राजस्थान रोयल्स दोस्रो पटक पराजित
६ राष्ट्रका हेर्ने पर्ने उत्कृष्ट चलचित्र अब युट्युबमा